विमानस्थलमा लफडा, सांसद काण्डले मच्चायो हंगामा — Sanchar Kendra
काठमाडौ। बेल्ट फुकालेपछि ‘सालेहरु‘’ भन्दै सांसद सरासर भिआईपीतिर छिरे १ महिला प्रहरी तात्तिँदै थिए १ तर, पुरुष हाकिमले वास्तै गरिदिएनन् १ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ आन्तरिक टर्मिनलको प्रवेशद्वारमा अस्ति सोमबार बिहान पौने ११ बजेको घटना हो यो ।
कञ्चनपुर क्षेत्र नं। २ का एमाले सांसद नरबहादुर धामीले हो, आफ्नो बेल्ट खोल्न लगाएबापत महिला प्रहरीलाई ‘साले’ भन्दै गाली गरेको । संसदीय समितिको टोलीमा मिसिएर रामेश्वर राय यादव, विमल श्रीवास्तवहरुसहित श्री एयरलाइन्सको उडानबाट धनगढीका लागि प्रस्थान गर्न नरबहादुर त्यहाँ पुगेका थिए ।
काउण्टरबाट बोर्डिङ पास लिएपछि झोलाहरु एक्सरे मेसिनमा हाल्ने र यात्रुले साथमा भएका बेल्ट, पर्सहरु खोलेर राख्नुपर्ने नियमअनुसार प्रहरीले नरबहादुरलाई पनि त्यसो गर्न लगाए । शुरुमा उनी बेल्ट नखोली अगाडि बढ्दै थिए । तर, ड्युटीमा रहेकी महिला प्रहरीले नम्रताका साथ भनिन्, ‘सर, बेल्ट खोलेर आउनुस् १’ यसपछि आँखा बटार्दै नरबहादुरले बेल्ट त खोले, तर जाँच सकिएपछि ‘सालेहरु‘’ भन्दै दुर्वाच्य निकाले ।
माननीयले नै यस्तो व्यहोरा देखाएपछि महिला प्रहरीले चेकिङ कमाण्डरका रुपमा रहेका सई कमल अधिकारीलाई सुनाए, ‘सर, यसले साले भन्यो १’ तर, सईले त्यो कुरामा त्यति ध्यान दिएनन् । ‘मान्यज्यूलाई बेल्ट पनि खोल्न लगाएको रु’ भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरेपछि महिला प्रहरीले थप प्रतिक्रिया दिइनन् ।
यात्रामा सहभागी अन्य माननीयहरुले त्यस दिनको घटना विवरण यसरी सुनाए, धामीजी भित्र भीआईपी कक्षमा ढिलो गरी आउनुभयो । आँखा रातो थियो, तम्तम्याइलो अवस्थामा देखिनुहुन्थ्यो । उडान समय भएकोले सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपबारे विस्तृत विवरण हामीलाई बताउन भ्याउनुभएन ।
उनी तिनै सांसद हुन्, जसले केही समयअघि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालको कार्यकक्षको ढोकामा लात्ती बजारेका थिए । अखिलको पोखरा महाधिवेशनबाट रामकुमारी झाँक्री अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा उपाध्यक्ष भएका धामी अहिले पनि एमालेमै छन् ।
०७४ को निर्वाचनमा राजनीतिमा आफूभन्दा निकै सिनियर कांग्रेस नेता एनपी साउदलाई पराजित गरेपछि उनको घमण्ड बढेको कञ्चनपुरका एमाले नेताहरु बताउँछन् । यो खबर जनआस्थामा छ ।
संसद्ले काम गर्न सकेन, अब चुनावमा जानुपर्छ ओली : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद्‍‌ले काम गर्न नसकेकाले चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग एमालेले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘संसद्‌ले काम गर्न सकेन, चुनावमा जानु पर्छ । साढे २ महिनामा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्ने अवस्था कसरी चल्छ ?’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्था चिर्नलाई चुनावमा जानुपर्छ ।’
ओलीले अबको चुनावमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर एकल रुपमा सरकार चलाउने दाबी गरे । सरकारले एमाले फुटाउने कुत्सित मनसायका साथ अध्यादेश ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘मैले ल्याएको अध्यादेश ठीक थियो । अहिलेको गलत छ ।
म संसद्‌बाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशतको ‘र’ लाई ‘वा’ बनाउँछु । दल त्याग गर्ने संवैधानिक अधिकार पाउनुपर्छ । तर, अहिले २० प्रतिशत कुनै एकमा हुने गरी ल्याएको अध्यादेश एमालेलाई विभाजन गर्ने कुत्सित मनसायले थियो ।’
प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । संसद्ले काम गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर उनले निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारका दुवै निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारले संविधान मिच्दा पनि चुप लागेर बसेको भन्दै सञ्चार माध्यमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले अहिलेको सरकारले संविधान मिच्दा पनि सञ्चारमाध्यम चुप लागेर बसेको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रमुख सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग मंगलबार अपराह्न अन्तरक्रिया गर्दै उनले सरकारलाई सञ्चार माध्यामहरूले खबरदारी गर्न नपुगेको बताए । ओलीले भने, ‘सरकारलाई खबरदारी गरेन भने लापरबाहीजस्तो हुँदो रहेछ, जस्तो अहिलेको सरकार । अहिलेको सरकारलाई खबरदारी पुगेन कि जस्तो लाग्छ । संविधान, कानुनको मतलब छैन ।’
ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउने मनसायले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले परमादेशबाट बनेको सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने भएकाले आफू चिन्तित भएको तर्क पनि गरे ।
ओलीले सरकारले बजेटमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । सरकारको सो निर्णयले नेपालमा विपत्ति ल्याउने ओलीको दाबी थियो । तर, आफ्नो पार्टीेले कालो धनलाई सेतो बनाउने सरकारको प्रयासलाई सफल हुन नदिने ओलीको दाबी छ ।
ओलीले एमसिसीबारे सरकारको धारणा पुनः माग गरे । उनले एमसिसीबारे सम्झाउन सरकारलाई अमेरिकी अधिकारी नै नेपाल आउनुपर्ने हो र ? भनी प्रश्नसमेत गरे । ओलीले सरकारको धारणा नआई आफूहरूले सोबारे धारणा बनाउन नमिल्ने अडान पनि दोहर्याए।
उनले भने, ‘यो सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण के हो ? १६५ सिट भएको सरकारको । पारित गर्ने हो कि होइन, हामीलाई केही सेयर गर्नुभएको छैन ।’ ओलीले मुलुक अब निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको पनि बताए । संसद्ले कामै गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुक अर्लिनिर्वाचनमा जानुपर्ने उनको तर्क छ ।
ओलीले भने, ‘सरकारले काम गर्न सकेन । त्यसले निर्वाचनमा जानुपर्छ । एमालेले अबको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सरकारबनाउनेछ।’ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय मर्यादाअनुसार काम नगरेकाले संसद् अवरोध गर्न बाध्य हुनुपरेको पनि जिकिर गरे।